PICOZU - NCHỊKỌTA AKỤKỌ NTANETỊ N'EFU - NETWORK NA INTANETI - 2019
Picozu - nchịkọta akụkọ ntanetị n'efu
Enwere m ugboro ugboro banyere isiokwu nke ndị nchịkọta akụkọ na ndị na-ese foto n'ịntanetị, na n'ime isiokwu gbasara foto kacha mma online m mere ka mmadụ abụọ n'ime ndị kachasị ewu ewu ha - Pixlr Editor na Sumopaint. Ha abụọ nwere ọtụtụ ihe ntinye ederede nke foto (Otú ọ dị, nke abụọ n'ime ha dị na nkwụnye ụgwọ) na, nke dị mkpa nye ọtụtụ ndị ọrụ, na Russian. (O nwekwara ike ịbụ ihe na-akpali mmasị: foto kachasị mma bụ online na Russian)
Picozu nchịkọta akụkọ n'ịntanetị bụ ngwaọrụ ọzọ dị n'ịntanetị ụdị a, ma eleghị anya, na ọnụ ọgụgụ nke ọrụ na ike, ọbụlagodi karịa ngwaahịa abụọ ahụ dị n'elu, ọ bụrụhaala na ọnụnọ nke asụsụ Russian bụ ihe ị nwere ike ime n'enweghị.
O nwere ike ịbụ na ị gaghị ede ede na nchịkọta akụkọ a, ị nwere ike ịtụgharị ma kpochaa foto, megharịa ya, dezie ọtụtụ foto na windo dị iche n'otu oge ma rụọ ọrụ ndị ọzọ dị mfe: n'uche m, enwere ike ime nke a na mmemme ọ bụla iji rụọ ọrụ na foto.
Isi window nke nchịkọta akụkọ
Kedu ihe ọzọ onye nchịkọta foto a ga-enye?
Na-arụ ọrụ na n'ígwé
A na-akwado ọrụ na-agbanye ọkụ na agbakwunyere, nghọta ha (ọ bụ ezie na ọ bụ n'ihi ihe ụfọdụ enwere naanị 10 ọkwa, ọ bụghị karịa karịa 100), ngwakọta ụdị (karịa na Photoshop). N'okwu a, ihe nkedo nwere ike ọ bụghị naanị rasta, kamakwa nwere ụdị vector (Shape Layer), ederede ederede.
Ọtụtụ ndị na - achọ ọrụ ndị dị otú ahụ, na - arịọ maka onye nchịkọta foto na mmetụta - ya mere, enwere ọtụtụ ihe a: n'ezie karịa na Instagram ma ọ bụ na ngwa ndị ọzọ m maara - ebe a bụ Pop Art na foto foto dị iche iche na ọtụtụ ọnụọgụ dị iche iche maka ịrụ ọrụ na agba. N'ijikọta ya na ihe gara aga (ọkwa, nghọta, nhọrọ dị iche iche na-agwakọta), ị nwere ike nweta ọnụọgụ nhọrọ ole na ole maka foto ikpeazụ.
Mmetụta ndị a na-ejedebe nanị n'ụdị iche iche nke oyiyi ahụ, enwere ọrụ ndị ọzọ bara uru, dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike itinye okpokolo agba na foto, kpuchie foto maọbụ mee ihe ọzọ.
Ọ gaghị abụ ụdị ngwá ọrụ ndị dị ka ahịhịa, nhọrọ, oyiyi cropping, jupụta ma ọ bụ ederede (mana ha niile nọ ebe a), kama banyere ihe nchịkọta ihe nke nchịkọta akụkọ "Ngwaọrụ".
Na ihe ndepụta nke a, na-aga n'okpuru ihe "Ngwaọrụ ndị ọzọ" ị ga-ahụ nchịkọta ihe nke memes, demotivators, ngwaọrụ maka ịmepụta mkpokọta.
Ma ọ bụrụ na ị gaa Extensions, ị ga-enwe ike ịchọta ngwá ọrụ maka iwepụta foto site na kamera weebụ, ịbubata na mbupuga n'igwe ojii na netwọk mmekọrịta, na-arụ ọrụ na eserese ma na-eke fractals ma ọ bụ eserese. Họrọ ngwá ọrụ achọrọ ma pịa "Wụnye", mgbe nke ahụ gasịrị ọ ga-apụta na listi ngwaọrụ.
A foto nke foto online na Picozu
Hụkwa: otu esi eme ka mkpado foto na weebụ
Tinyere ihe ndị ọzọ, site n'enyemaka nke Picozu, ị nwere ike ịmepụta mkpokọta nke foto, ngwá ọrụ maka nke a bụ na Ngwaọrụ - More Ngwa - Collage. The collage ga-ele anya dị ka foto. Ị ga-achọ ịtọ nha nke oyiyi ikpeazụ ahụ, ọnụ ọgụgụ nzaghachi nke oyiyi ọ bụla na nha ya, wee họrọ foto na kọmputa ahụ nke a ga-eji mee ihe a. Ị nwekwara ike ịlele Mpempe akwụkwọ Mpempe akwụkwọ nke mere na etiti ọ bụla na-etinye na oyi akwa dị iche iche ma ị nwere ike idezi mkparịta ụka ahụ.
N'ịkọ elu, picozu dị ike, yana ọrụ dịgasị iche iche, nchịkọta foto na ihe oyiyi ndị ọzọ. N'ezie, n'etiti ngwa kọmputa, e nwere mmemme ndị dị elu karịa ya, ma otu onye ekwesịghị ichefu na nke a bụ ụdị ntanetị, ma ebe a, editọ a bụ otu n'ime ndị ndú.
Akọrọ m ihe dị anya site na njirimara nke editọ, dịka ọmụmaatụ, ọ na-akwado Darg-And-Drop (ị nwere ike ịdọrọ foto ozugbo site na folda na kọmputa), isiokwu (ebe ọ dị mfe iji ya na ekwentị ma ọ bụ mbadamba), ikekwe oge asụsụ Russian ga-apụta n'ebe ahụ (enwere ihe maka ịgbanwe asụsụ ahụ, mana enwere Bekee naanị), enwere ike ịme ya dị ka ngwa Chrome. Naanị m chọrọ ịgwa gị na onye nchịkọta akụkọ dị otú ahụ dị adị, ọ dịkwa mma ileba anya ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị na isiokwu a.
Mwepụta onye nchịkọta akụkọ nchịkọta akụkọ nke Picozu: http://www.picozu.com/editor/